Dibadbaxyo Da’da Hawlgabka Lagaga Soo Horjeedo Oo Ruushka Gilgilay – somalilandtoday.com
Dibadbaxyo Da’da Hawlgabka Lagaga Soo Horjeedo Oo Ruushka Gilgilay
(SLT-Moscow)-Dibadbaxyo cusub oo looga soo horjeedo kor u qaadidda da’da hawlgabka ayaa ka dhacaya guud ahaan dalka Ruushka, kadib baaq ka yimid hoggaamiyaha mucaaradka ah ee xidhan Alexei Navalny.
Isbadallada lagu sameeyey da’da shaqo ka fadhiisiga ayaa sababay caro dadweyne oo ballaaran dalkoo dhanna ku fiday, ayadoo taageerayaasha Mr Navalny ay qorshaynayaan isusoo baxyo ka dhacaya in kabadan 80 magaalo si arrintan loo muujiyo.
Dibadbaxyada ayaa ka bilowday Vladivostok iyo magaalooyin kale oo kuyaal Bariga fog ee dalka Ruushka.
Dibadbaxyada ayaa kusoo aadaya doorashada 26 guddoomiye goboleed, oo Moscow ay kamid tahay, kuwaas oo dhacaya Axaddda.
Sanadka 2019, da’da shaqo ka fariisiga ragga ayaa laga dhigi doonaa inta u dhaxaysa 60 ilaa 65 jir, halka dumarkana laga dhigi doono 55 ilaa 60 jir. Madaxweyne Putin ayaa yara khafiifiyey qorshihii hore ee ahaa in da’da shaqo ka fadhiisiga dumarka laga dhigo 63 jir.
Da’da ragga Ruushku ay gaaraan ayaa lagu sheegaa 66 sano dumarkana 77 sano. Sida ay sheegayso hay’adda caafimaadka adduunka.
Mr Navalny, hoggaamiyaha ugu cad cad mucaaradka Ruushka, ayaa qorsheeyey in uu hoggaamiyo dibadbax Axadda ka dhici doona magaalada Moscow. Balse bishii hore ayaa maxkamadi ku xukuntay 30 cisho oo xarig ah xeerarka dibadbaxyada oo uu jabiyey.
Lahaanshaha sawirkaAFPImage captionMr Navalny
Ninkan oo muddo dheer u ol’olaynayey ka hortagga musuqmaasuqa ayaa sheegay in xariga gaagaaban ee loo gaysanayaa uu yahay mid lagu khalkhal galinayo hawlihiisa siyaasadeed.
Wuxuuna si xooggan u beeniyey dhammaan eedaymaha loo soo jeediyey.
Waxaa loo diiday TV-ga qaranka, waxaana Mr Navalny laga hor istaagay in uu madaxnimada kula tartamo Vladimir Putin bisha March.
Bayaan ay soo saartay kooxda Mr Navalny dibadbaxyada Axadda ka hor ayaa lagu sheegay “Putin iyo xukuumaddiisu waxay xoolaha dalka boobayeen 18-kii sano ee lasoo dhaafay”
Mr Putin ayaa sheegay in tallaabada kor loogu qaaday da’da shaqo ka fariisiga ragga iyo dumarka ay keentay dib u dhac sanado badan qaatay ayna tahay khatar horseedi karta sicir barar iyo saboolnimada oo sii siyaadda.
In intaas ka badan dib loo sii dhigaana ay waxyeelayso xasiloonida iyo nabadgalyada bulshada Ruushka.
“Dib u dhig intaas ka badan waxay noqon kartaa masuuliyad darro,” ayuu yiri. ” Go’aanadeenu waa inay iminka noqdaan, ayna ahaadaan kuwo isu dheelli tiran”
Ururada shaqaalaha ayaa ka digaya in qofkuba aanu gaarayn xilli uu ku qaato dhaqaale hawgabnimo.
Tobonaan kun oo qof ayaa isugu soo baxay guud ahaan dalka Ruushka toddobaadyadii u dambeeyey, arrinta dibadbaxayaasha ayaa dood ka dhalisay dhammaan dhinacyada siyaasadda.